Xafiiska 2016 dhibaatooyin ayuu kala kulmaa OS X El Capitan | Waxaan ka socdaa mac
Microsoft waxay ka shaqeyneysaa isku dayga inay ku xalliso cilladaha Office 2016 ee Mac
Ku dhowaad usbuuc ka hor OS X El Capitan ayaa loo sii daayay dadweynaha waxaana sii dheer hagaajinta ay la timid waqtigaas, sidoo kale uu lahaa "run-ins" qaarkood oo leh softiweer horey si sax ah ugu shaqeyn jiray OS X Yosemite, tusaale ahaan tan waxaan ku haynaa Office 2016, xafiiska xafiiska Microsoft.
Isticmaalayaasha tan Xafiiska 2016 ee Mac Waxay la kulmeen qaladaad halis ah markii ay isticmaaleyeen softiweerka, labadaba Word, Excel, Outlook iyo PowerPoint way barafoobeen, xitaa dadka isticmaala Office 2011 sidoo kale waxay leeyihiin dhibaato kale oo dhanka Muuqaalka ah oo ah OS X El Capitan. Daabacaado kala duwan ayaa helay cabashooyin ka yimid dadka isticmaala marka lagu daro dun furan oo ka socota websaydhka taageerada Microsoft ka hadlaya dhibaatooyinka kala duwan.
Microsoft way ka warqabtaa dhibaatooyinkaas barnaamijyadooda iyo ayaa ka jawaabayay cabashooyinka kala duwan ee isticmaalayaasha. Mawduuca furan ee ku jira bogga taageerada, Maamulaha Barnaamijka Microsoft, Faysal Jeelani, wuxuu sheegay in shirkaddu ay si adag ula shaqeyneyso Apple si ay u xalliso dhibaatooyinkaas, laakiin wuxuu sheegay in weli uusan jirin waqti cayiman oo xalka la siinayo.
Waan ognahay in isticmaaleyaasha qaarkood laga yaabo inay dhibaatooyin kala kulmaan Office 2016 ee Mac markay u socdaan El Capitan. Waxaan si firfircoon u baareynaa arrinta Apple. Ilaa inta xal laga gaarayo, dadka waxaa lagula talinayaa inay rakibaan Xafiiska ugu dambeeya ee Office 2016 ee loogu talagalay Mac cusbooneysiinta iyadoo la adeegsanayo Microsoft AutoUpdate.
Dhibaatooyinku waxay u dhexeeyaan shilal aan kala sooc lahayn, halka isticmaaleyaasha kale xitaa ma awoodaan inay furaan wax barnaamij ah Xafiiska. Dhinaca kale iyo gaar ahaan Muuqaalka, dalabka leh dhibaatooyinka ugu badan, xitaa adeegsadayaasha Xafiiska 2011 xaaladaha qaarkood ma gali karaan sanduuqooda.
Hadda xalka kaliya ayaa ah in la rakibo nuqul hore, taasi waa, Office 2011 (iyada oo aan loo isticmaalin Muuqaalka maareeyaha boostada) oo sug in Microsoft ay sii deyso balastar dhab ah oo hagaajinaysa xaaladdan si ay mar kale u cusbooneysiiso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Microsoft waxay ka shaqeyneysaa isku dayga inay ku xalliso cilladaha Office 2016 ee Mac
Waa masiibo, taleefanka iska dhig, muddo dheer ayey qaadataa in la furo wax kasta oo codsi ah ... mahadsanid Muuqaalka Muuqaalka 2016 waxaan soo helay Airmail iyo sababta oo ah ma jirto meel kale oo la aqbali karo oo ka sarreysa iyo erey haddii aan ...
Jawaab Jose Agudo
- Codsiga asalka ah, Mail, ma muujinayo farriimaha ka imanaya xiriirada VIP.
- Sawirradu si otomaatig ah ayey u furmaan markaad isku xirto iPhone xitaa haddii aadan haysan sawirro aad soo dejiso.
- Awoodda korantada ayaa ka gaabinaysa nooca ugu dambeeyay ee Yosemite.
- Cleanmymac 3 ma shaqeynayo waana in la soo dejiyaa oo mar labaad la rakibaa.
- Kuwa kale waxay umuuqdaan kuwa shaqeynaya, laakiin waxbadan kamaqan waxqabad.
- Sidoo kale waxaan leeyahay dhibaatooyin shilalka ah oo ku saabsan «Split Screen» cusub markii ay timaado daawashada dalabka Xafiiska.
- Dhibaatooyinka sida Autodesk Autocad, way sudhan yihiin.
Ismaaciil Palacios Baeza dijo
Waxaan u maleynayaa inaan qarin doono Mac-kayga oo aan u wareegi doono PC, sida asxaab badan iyo kuwa i yaqaan ay ku taliyeen. MacBook-kii aan u soo iibsaday aalad shaqo waxaanan lahaa fikrad xun in la rakibo Kabtanka oo dhibaatooyin noocan oo kale ah ku keenay Ereyga oo aan dhibaato weyn ku qabo ballanqaadyadii shaqada. Waxaan u maleynayaa inay mas'uuliyad darro tahay Apple inay soo saarto nidaam hawlgal oo dhibaato u keena Xafiiska, taas oo ah, shaki la'aan, inay tahay tan ugu isticmaalka badan adduunka. Apple muxuu dhahaa? miyuu sii joogayaa sida Volkswagen?
Jawaab Ismael Palacios Baeza
Apple waa inay daabacdaa nidaam ay dib ugulaabaneyso, laga bilaabo El Capitan, ilaa noocii hore ee OSX 10 oo aad ufiican. Waxaan u maleynayaa inay tahay wadada kaliya ee lagu magdhabo kuwa aan digtoonaan u laheyn Guinea Pigs »
Dhibaatooyin halis ah ayaan qabaa tan iyo markii aan rakibay kabtanka, ma isticmaali karo ereyga oo wuu qabowdaa markasta, maxaa la sameeyaa si loo xaliyo? aaDayaanna ¡¡¡¡¡
Jawaab Leo Echevarria
Markaan xalliyo dhibaatada soo socota, soo dejiso Xafiiska 2016 iyo markaan isku dayayo inaan rakibo, waxaan helayaa farriin ii sheegaysa in xafiisku aanu la jaan qaadi karin OS X, wuxuu ii sheegayaa inaan dajiyo Daaqadda, ma jirtaa si kasta oo lagu socodsiinayo iyadoo la adeegsanayo Nidaamka hawlgalka Mac?
Waxaan u istcimaalaa poin power shirarka, waxaan haystaa Mac, oo leh oofice 2016 ayay u dhimanaysaa, waan cusbooneysiiyay El Capitan maxaan sameeyaa mid lamid ah ama ka xun?
Waa musiibo, Excel 2016 ma aqriso feylasha qaar, hadday aqrisana waxay ku aqrisaa qaladaad. Waxaan ku xiriiray kaalmada farsamada ee khadka tooska ah, waxaan sharaxay inaan furi karo feylkaas iyo kuwa kaleba nooc kasta wixii ka horeeyay sanadka 2016. Ka dib markuu iga dhigay inaan la shaqeeyo waxyaabo kale oo kala duwan, wuxuu ii sheegay inay dhibaatadu tahay feylka. Waxaan u sheegay in faylkaan ay isticmaaleen dad badan oo aysan jirin wax dhibaato ah. Wuxuu igu adkeeyay inaan dib u eego feylahayga, waxaan hayaa 50.000 oo feylal oo aan dib u eego. Hagaag jawaabtaas waxaan aaday dukaanka maconline ee kuyaala Alto de las Condes de Santiago de Chile, kadib markii aan waqti ku lumiyay waxyaabo badan oo badalashooyin ah, wuxuu ii sheegay hadii ay ku furanto lambarro, waa dhibaato heer sare ah feylka uu furayna wuxuu ii sheegay dhibaatadu waxay ahayd mid heer sare ah laakiin waxba ma aysan qaban karin. La hadal maamulaha bakhaarka, wuxuu yidhi, "Faylka ay kuu direen ma wuxuu ka yimid mac? Waxaan ugu jawaabey inuusan i sheegin »dhibtu waa jirtaa, hadaan laga bilaabo min mac ilaa mac ma shaqeyneyso? Waxaan u maleynayay inaan qaldanahay jawaabtaas. Dhibaatada heysata ayaa ah inuu heysto labo Macs ah, mid Excel 2016 midna wuxuu leeyahay Excel 2011 waxaana tusay taas 2011 hadii uu furo midna 2016 ma ahan. WUXUU I SHEEGAY, ANAGU MA QABAN KARNO AMA LACAGTA U SOO CELI KARNO AMA AANU KUU SAMEYN KARO. XAFIISKA AAD. oo halkan waxaan la joogaa kombuyuutar dhawaan lagu iibsaday qiimo ku dhow US $ 2500 mana ka shaqeyn karo.
Aad ayaan uga niyad jabsanahay MAC iyo XAFIISKA iyo in kabadan kii ugu dambeeyay ee aanan haysan badal adeegsi.
Ku jawaab Reinaldo
Cuntada Badda dijo
Waxaan hayaa buugga Mac pro retina 13 2016. Gebi ahaanba waan ka niyad jabay, Mac ahaan sida Xafiiska 25. Waxaan kaga fiicnaaday kumbuyuutarkeyga qiimaha XNUMX% ee qalabkan cusub. Labada adeeg bixiyeyaashu midba midka kale wuu eedeeyaa, cidina uma jawaabaan. Kumbuyuutarku wuu burburaa, Excel waa waalan tahay, in email la furo waa madax xanuun, marka feylasha la duubayo magaca ma ilaalinayo ka dibna ma muuqanayo, iwm, iwm.
Ku jawaab Seafood
Sida xafiiskan 2016, waa ku ceeb Apple iyo Microsoft inay wax qabsadaan ama ay soo celiyaan lacagtii la bixiyay si loo isticmaalo, kama shaqeyn karo xafiiska iyo OS-ka Macbook Pro cusboonaysiinta CAPTAIN waana wax laga yaqyaqsoodo.
REINALDO MA SOO XALISAY ARINTA?
Runta ayaa ah wali waan ka niyad jabsanahay, maadaama maal gashigu uu yahay in la helo wax "wanaagsan" runtiina ay ka tagto waxyaabo badan oo la doonayo, waxaan haystaa hawada makbook muddo seddex bilood ah oo xafiiska 2016 la rakibay, runtuna waa, software-ka waa gaabis ah, Mararka qaarkood way ku dhegtaa, Macbook laftiisa ayaa "ku dhegta", runtuna waxay tahay inaadan xitaa rabin inaad isticmaasho.
Pedro Antonio Manrique sawirka meeleynta dijo
Waxaan rakibay OSX CAPITAN hadana Office POWER POINT iyo WORD way joojiyeen shaqadii. Fadlan i caawi, waxaan hayaa ballanqaadyo shaqo. Ma ku laaban karaa OSX YOSEMITE?
Jawaab Pedro Antonio Manrique
KELIYA MA AHA! Qoraalka waxaa la daabacay Oktoobar 6, 2015, waa Ogosto 2016 dhibaataduna waa socotaa ... Excel ayaa waali igu wado !!! Bilowgii dhibaatadu waxay ahayd mid kumeel gaar ah, kadib cusbooneysiin aan doqonnimo u aqbalay anigu si sax ah uma sii shaqeyn karo, waqti badan ayaan ku lumiyaa marar badan oo barnaamijka dib loo bilaabayo. Wixii ku baxay liisanka xafiiska, waxaan iibsan lahaa PC ku hubaysan xafiiska burcad-badeedda waxaanan ugu shaqeyn lahaa si deggan ugu macquulsan ...
Ku jawaab Flowerade
haye moreno dijo
Waa fiasco dhab ah, xafiis leh mac os capitan.
Ku jawaab jaiver moreno
Sawir-hayaha Fernando Palma dijo
subax wanaagsan, waxaan u baahanahay caawimaad.
Ereygu aad ayuu u shaqeeyaa mana awoodin inaan keydiyo dukumiintiyada asal ahaan iyo magac kale oo feylal ah.
Waan ku faraxsanahay caawintaada.
Jawaab Fernando Palma
Waa sidee nasiib daro intey le'eg tahay tufaaxan aan mas'uuliyad laheyn oo ha nooga iibiyeen shiito aan qayaxan aheyn oo shil ahaana ma shaqeynayo maxaa yeelay wuxuu waxyeelleeyaa feylashayada mid wuxuu u muuqdaa mid xun Mac-gaaga weyn ee shaqeynin wuuna xirayaa faylasha fadlan qof ayaa iga caawiya sida aniga oo kale horay u iibso xubinimada cusbooneysiinta rukunka iyo qashin-qubkaani wuxuu dhahayaa mid aan ku habboonayn ereyga mac laakiin waa kaliya in haddii aan furmo aan fiicanahay
Ku jawaab peter
Keliya maahan in ereygu heer sare sii xumaado, wuxuu furaa faylal aan dhammeystirnayn. Sida iska cad qofna ma jawaabo. U wareeg xafiiska 2011.
Ismaaciil Sánchez Hernández dijo
Ereyga, kuma helayo fiidiyowga gadaal markii aan dooranayo qoraalka tafatirka. Maxaan sameyn karaa. Waxaan hayaa 27 ′ iMac retina.
Jawaab Ismael Sánchez Hernández
Waxaan soo iibsaday macbook la isticmaalay, laga soo bilaabo 2012, isla markaana isla xafiiska ayaan dhibaato ku qabaa, waxaan u maleeyay markii aan u wareego mac inaan joojin doono dhibaatooyinka noocan oo kale ah, haddii xal u muuqdo fadlan sidan igu soo wargeli.
Ku jawaab arismendy
Waxaan haystaa MacOS Sierra oo leh Office 2011. Waxay u shaqeysay si heer caalami ah illaa aan go'aansaday inaan cusbooneysiiyo OS sida uu kugula taliyay AppStore. Halkaasna dhibaatooyinkii Xafiiska ayaa ka billowday. Outlook wuxuu had iyo jeer i weydiiyaa inaan soo dejiyo 3 nooc oo Shiine ah oo aanan isticmaalin, Ereygu wuxuu joojiyaa hubiyaha higaada, Excell mararka qaar kama nuqulo qaacidooyinka hal unug mid kale, isagoo ku wareejinaya kaliya qiimihii hore. Way cadahay inaysan jirin iswaafajin 100% udhaxeeya Mac OS iyo Microsoft Office. Mar dambe kuma dhicin inaan cusbooneysiiyo softiweerka. Waxaan la yaabanahay haddii uusan jiri doonin dagaal ganacsi oo aamusnaan ah oo u dhexeeya labada shirkadood. Microsoft waxaa waajib ku ah inay abuurto wax soo saar u dhigma oo loogu talagalay Mac, si aysan ugu abuurin kombuyuutarrada kombiyuutarrada. Microsoft waa lagu soo oogi karaa hadii aysan sameyn. Laakiin cilladahan, sidee loo muujiyaa rabitaan ah in la abuuro barnaamijyo liita oo horumaray oo aan is-waafaqsaneyn si loo abuuro dhaawac ganacsi oo loo geysto Mac? Way ka sii dhib badan tahay cadeynta ujeedka ...
Jawaab JF Bradfer
Suurtagal ma ahan in aan horeyba ujirnay Oktoobar 2017 dhibaatooyinkuna wali taagan yihiin! Ma inaan sugaa xafiiska 2018? Waxa ugu fiican ayaa ah inay jiraan Windows iyo xitaa Linux!
Jawaab Gerardo García
Qofka ka jawaaba xalka, waxaan dhibaato ku qabaa OS sierra oo leh xafiiska 2011, mashiinku ma shaqeynayo iyo balakoonkaas yar ee i dhibaya, marka la soo koobo, oo ah dhibaatada.
Recontra dhibsado, Excel ma furo my Mac, waxay umuuqataa inuu qalad lama filaan ah dhacay, maalintii oo dhan waxaan raadinayay xalal iyo waxba. I caawi!!!!
FaceAlert waa bilaash wakhti xadidan
Raadinta Caalamiga ah ee Apple TV-ga cusub ayaa leh muhiimad